Umzi mveliso weChUANGRONG
UCHUANGRONG uneefektri ezintlanu
UTSHINTSHO lishishini lesabelo kunye nenkampani edibeneyo yorhwebo, eyasekwa ngo-2005 egxile kwimveliso ye Imibhobho HDPE, neZilinganisi & Ivaluva, PPR Imibhobho, neZilinganisi & Ivaluva, PP ucinezelo izixhobo & Ivaluva, kunye nokuthengiswa kwePlastiki Pipe Welding oomatshini, Pipe Izixhobo, Pipe yokulungisa uqinisa kwaye nangokunjalo.
I-CHUANGRONG'sInjongo kukubonelela abathengi abahlukeneyo ngesisombululo esifanelekileyo sokumisa inkqubo yeeplastiki. Inokubonelela ngenkonzo eyilelweyo, eyenzelwe iprojekthi yakho.
UTSHINTSHOSoloko unikezela ngeemveliso ezilungileyo kunye nexabiso labathengi. Inika abathengi inzuzo elungileyo yokuphuhlisa ishishini labo ngokuzithemba ngakumbi. Ukuba unomdla kwinkampani yethu kunye neemveliso, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
Itekhnoloji iyabuphucula ubomi
I-CHUANGRONG kunye neenkampani zayo ezinxibeleleneyo zibanga i-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nokufakwa kombhobho omtsha weeplastiki kunye nokufakwa. Ibineefektri ezintlanu, enye yezona zinto zinkulu ezenza umthengisi kunye nomboneleli wemibhobho yeplastiki kunye nokufakwa eChina. Ngaphaya koko, inkampani inezinto ezingaphezulu kwe-100 zeeseti zemigca yemveliso yombhobho eqhubela phambili ekhaya nakwamanye amazwe, iiseti ezingama-200 zezixhobo ezifanelekileyo zemveliso. Amandla emveliso afikelela ngaphezulu kwe-100 lamawaka eetoni. Eyona nto iphambili iqulethe iinkqubo ezi-6 zamanzi, igesi, ukuntywila, ukumbiwa kwemigodi, ukunkcenkceshela kunye nombane, ngaphezulu kwe-20 uthotho kunye nokubalulwa okungaphezulu kwama-7000.
I-CHUANGRONG ineendlela zokuchonga ezipheleleyo kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo eziphambili zokufumanisa ukuqinisekisa ulawulo lomgangatho kuzo zonke iinkqubo ukusuka kwimveliso eluhlaza ukuya kwimveliso egqityiweyo. Iimveliso zihambelana ne-ISO4427 / 4437, ASTMD3035, EN12201 / 1555, DIN8074, AS / NIS4130 esemgangathweni, kwaye yamkelwe yi-ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
Iqela le CHUANGRONG LOKUHWEBA
I-CHUANGRONG ineqela eligqwesileyo labasebenzi elinamava atyebileyo. Inqununu yayo kukuQiniseka, ukuSebenza kunye nokuSebenza ngokufanelekileyo. Iseke ubudlelwane beshishini kunye namazwe angaphezulu kwama-60 kunye nemimandla kwishishini elinxulumene noko. Njenge-United States, i-Chile, i-Guyana, i-United Arab Emirates, i-Saudi Arabia, i-Indonesia, iMalaysia, i-Bangladesh, i-Mongolia, i-Russia, i-Afrika njalo njalo.